Ogaden News Agency (ONA) – 74 Mayd oo Laga Helay Xeebaha Dalka Liibiya.
74 Mayd oo Laga Helay Xeebaha Dalka Liibiya.
Meydadka lagu qiyaasay 74 qof oo la aaminsan yahay in ay ahaayeen tahriibayaal ayaa laga helay xeebta magaalada al-Zawiya ee galbeedka dalka Libya, sida ay sheegtey hay’adda Bisha Cas ee dalka Liibiya.
Sida laga soo xigtay Afhayeen u hadley hay’adda Bisha Cas oo lagu magacaabo Maxamed Al-Mistri ayaa Wakaalada Wararka ee AP u sheegay in meydadka la helay subaxnimadii shalay ahayd ee Talaadada ahayd, iyagoo baddu soo tuftey, ma cadda ayuu yidhi halka doontii ay la socdeen ay ku degtey iyo xiliga ay degtey toona.
Maxamed Al-Mistri ayaa sheegay maamulka magaalada al-Zawiya in ay meydadka u qaadeen Tripoli si la isugu dayo in la aqoonsado meydadkooda. Soomaali badan ayaa weli ku sugan xeebaha dalka Libya lamana yaqaan in ay kamid yihiin dadka meydkooda la helay iyo in kale.